“ဂျလေဘီ့သင်ပုန်း ၂၀၁၂ (သို့) ဆဲဆိုခြင်းအနုပညာ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ဂျလေဘီ့သင်ပုန်း ၂၀၁၂ (သို့) ဆဲဆိုခြင်းအနုပညာ”
“ဂျလေဘီ့သင်ပုန်း ၂၀၁၂ (သို့) ဆဲဆိုခြင်းအနုပညာ”
Posted by မောင်ရိုး on Dec 31, 2012 in Creative Writing | 53 comments
မင်္ဂလာပါ မန်းဂဇက် …………။
နှစ်ဟောင်းကုန်ပြီး နှစ်သစ်ကိုရောက်တော့ မှာမို့ ရွာသူားအသီးသီး အမှတ်တရလေးတွေရေးကြတော့ ကျနော်လည်း တစ်ခုခုရေးချင်မိပြန်ပြီလေ …..။ ဒါကြောင့် ကျနော်သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်းကျင်က အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတွေးမိပြီး ခရီးသွားရင်း ရေးမိပြန်ပြီပေါ့  ……။
ဒီနေရာမှာတစ်ခုလေး ပြောချင်မိတာက သဂျီးမင်းရဲ့  ခေါင်းစဉ်တွေကို နှစ်သက်လွန်းလို့ တုပ မှီငြမ်းမိကြောင်းပါ ….။
ခွင့် လွှတ်ပါ ဦးခိုင်ခင်ဗျာ …….။
“ ဆဲဆိုခြင်း အနုပညာ (သို့) ရသမြောက်သော ဆဲဆိုခြင်း” ဟုဆိုပါလျှင် ကျနော့်ကို ဆဲချင်ကြလိမ့် မယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆဲကြပါလေ….။ မန်းဂဇက်ရွာသားဖြစ်ရင်တော့ နဲနဲလောက်တော့ ဆဲတာ ခံနိုင်ရမှာပေါ့  …။ ဒါပေမဲ့  …. သက်သက်သာသာလေးတော့ ရသမြောက်အောင် ဆဲကြပါနော ….။ တော်ကြာ ရှိစု မဲ့စု ပို့ စ်လေး အပိတ်ခံ ထိနေပါဦးမယ် ….။ ကဲ ကဲ … ဆဲလို့ ပြီးကြရင်လည်း ဆဲဆို ခြင်းဆိုင်ရာ ရသလေးတွေကို နဲနဲလောက် တင်ပြပါရစေဦး ……..။
ကျနော် လူတွေကြားထဲ သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာ လူပေါင်းစုံနဲ့ ဆက်ဆံရပါတယ် . ..။
ပညာတတ် ၊ ပညာမဲ့ ၊ လူယဉ်ကျေး ….. စသည်ဖြင့် ပေါ့ ဗျာ ….။ ဒီအခါမှာ အများစုက အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့
ဆဲ ရေးတိုင်းထွာတတ်ကြတာကိုလည်း တွေ့ ဖူးကြမှာပါ …။ ဆဲ ဆိုခြင်းအမှုကိုတော့ လူယဉ်ကျေးများနဲ့ တစ်ကွ
ယဉ်ကျေးချင်ယောင်ဆောင်သောသူများက မနှစ်သက်ကြဘူးပေါ့ ဗျာ ။
သို့သော်လည်း ကျနော်တို့လို ယောက်ကျားအများစုက ယောက်ကျားအချင်း ချင်း နဲနဲတော့ တိုင်းထွာသမှုပြုကြတယ်ပေါ့…..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆဲတိုင်းတော့လည်း ဆဲချင်လို့မဟုတ်ပြန်ဘူးလေ …။ တစ်ချို့  ကအကျင့် ပါနေလို့ ဆဲတယ် …. တစ်ချို့ က “အာလုပ်” စကားအဖြစ် ဆဲတယ် ၊ တစ်ချို့ က …. စကားဆက်အဖြစ် ဆဲတယ် ၊ တစ်ချို့ ကျတော့ ယောင်ယမ်းပြီး ဆဲ တယ် ….၊ တစ်ချို့ က ဒေါသထွက်လို့ ဆဲတယ် …….၊ တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း….. ချစ်လွန်း လို့ဆဲတယ် …..။ ဟုတ်ပါပြီ ….. ဘယ်လို ဆဲ ဆဲ မသင့် တာကိုတော့ ငြင်းမရဘူးပေါ့ …..။
သို့သော်လည်း….. တစ်ချို့ အခြေအနေ တစ်ချို့  အချိန်အခါ တစ်ချို့ နေရာတွေမှာတော့ ဆဲ တာလေးက ချစ်စရာ ကောင်းနေသလားပဲ ….။ ဒီလိုပါ …. မိခင်လုပ်သူက သူ့ရဲ့  ချစ်လှစွာသော သား….. ရင်မှဖြစ်သော သားးးးးး ကို ကြည်စယ်ရင်းနဲ့ ကလိထိုးပြီး “အေဘေးလေး”….. ဒီလိုလေး ဆဲ
လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ …..။ ကျနော်တို့မြင်ရတဲ့သူတွေမှာ မိခင်နဲ့ ကလေး တို့ရဲ့  ချစ်စဖွယ် သိင်္ဂါရ ရသ လေးများ မြောက်သွားသလားလို့ပါ။
နောက်တစ်ခုက …. ငယ်စဉ် အလယ်တန်းကျောင်းသားတုန်းက ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ အိုင်ချင်းကဗျာထဲက ဆဲ လိုက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ ။ ကဗျာကို အပြည့် အစုံမမှတ်မိပေမဲ့ ဇတ်ကြောင်းလေးက ဒီလို့ဗျ ……။
အိုင်ချင်းကဗျာတွေ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ညောင်ရမ်းခေတ် ရဲ့  တောရွာလေး တစ်ရွာမှာ ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ နှစ်ဖက်မိဘတွေရဲ့  သဘောမတူလို့ ခွဲထား ခံကြရပုံ ရပါတယ် ..။ တစ်ညနေမှာတော့ ရွာလယ်လမ်းမှာ အမှတ်မထင် ဆုံမိကြပြီး ပုခုံးပေါ်လက်တင်ပြီး အလွမ်းသယ် ကြတယ်ပေါ့ ဗျာ ….။ အဲဒီမှာ ….
သူတို့  ချစ်သူတွေကို ကွဲကွာစေဖို့ ကတုံး ကတိုက် လုပ်ပြီး ဂုန်းလျော (ကုန်းလျော)တဲ့  ဒေါ်ကြီး ၊ ဒေါ်လေးများကို ပြောလိုက်ပုံက ….( ဆဲ လိုက်ပုံက ) …
” တို့ချစ်ခြင်းကို၊ ကွင်းအောင်တစေ ၊ နေ့တိုင်းမွှေသည့်၊ သက်ကြီးဝန်တို ၊
(ဂုန်းမအို) ရေလိုခန်းခြောက်ပါစေသား” ……… တဲ့  ….။
ဒီနေရာမှာ ဂုန်းမ (ကုန်းမ) ဆိုပြီး ဆဲရေး တိုင်းထွာ ကျိန်ဆိုလိုက်ပေမဲ့  ရုတ်ရင့် ကြမ်းတမ်းတဲ့ ရုဒ္ဓရသ ကို မခံစားရပဲ ချစ်သူနှစ်ဦးကို ကရုဏာစိတ်ပိုကဲမိလို့ ကရုဏာရသလေးများ မြောက်သွားမလားပဲ ………။
ဒီတစ်ခါကတော့ ကိုယ်တွေ့ လေးပါ ….။
တစ်ခါက ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာ ကားစောင့်ရင်း ဦးလေးကြီး တစ်ဦး နှာချေနေတာနဲ့ ကြုံရပါတယ် ….။ နှာချေတာများ အကြိမ်(၂၀)လောက်ရှိလားပဲ …. ဆက်တိုက်ဆိုသလို နှာချေပြီးတော့ နောက်ဆုံးမှာ ဆဲလိုက်ပါရော …..။ ကျနော်လည်း ရီချင်လွန်းလို့ လျှာကို သွားနဲ့ကိုက်ထား
လိုက်ရတယ် ….. သူဖြစ်ပုံက ဒီလိုလေ ….။
“ ဟတ်ချိုး…ဟတ်ချိုး….ဟတ်ချိုး …………..ဟတ်ချိုး …..ဟတ်…ဟတ်….ဟတ်
ချိုး….နင့် အ မေ ရိုး …” တဲ့  ……။
ကဲ ကြည့် ဗျာ …..။ ကျနော် ရီချင်တာ လွန်သလားဗျာ ….။ အဲဒီမှာ သူ့ ဆဲလိုက်ပုံက ဟတ်ချိုးနဲ့ ကာရံညီပြီး ဟာသရသ လေးများ မြောက်နေသလားလို့နော် ………။ နောက်ထပ် တွေးပြီး ပြုံးမိစေတဲ့ စလေဆရာကြီးဦးပုညရဲ့ ဆဲရေးတိုင်းထွာတဲ့ အရေးအသားလေးပါ …။ မြို့ ဝန်မောင်အိုးသို့ ပေးသော မေတ္တာစာမှာလို့ထင်ပါတယ် …..။ သွားပုတ်လေလွင့် ပြောတတ်တဲ့ မောင်အိုးရဲ့ 
ပါးစပ်ကို ဘယ်လိုများနှိုင်းလိုက်လဲဆိုတော့ … “ ပါးစပ်နဲ့ မအား ၊ လဲ၍ထားသလို” ဒီလိုလေး ရေးထားပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ “ မအား ” ဆိုတာဘာလဲလို့ ဆိုရရင် ……. ခွင့် လွှတ်ပါ အဓိပ္ပါယ်သိမှ ဖြစ်မှာမို့ ပြောရပါမယ် ..။ အမျိုးသားအင်္ဂါ လို့မှတ်သားခဲ့ရပါတယ် ။ ဆဲရေးတိုင်းထွာလိုက်ပေမဲ့ ဖတ်ရသူမှာ ဟသရသ မြောက်ပြီး ပြုံးမိစေပါတယ် ။
အဲ … တစ်ခုရှိတာက အာသံ ၊ လျှာသံ နဲ့ ဌန် ကရိုဏ်း ကျကျ ဆဲပြီဆိုရင်တော့ ကြားရသူမှာ နားမခံသာဘူးဗျို့ ။ ဒါမျိုး ဆဲတာကတော့ ငါးစိမ်းတန်းမှာရန်ဖြစ်တာတို့ သင်္ဘောဆိပ်မှာ ဈေးသည်တွေ နေရာလုရင်း ရန်ဖြစ်တာတို့မှာ တွေ့ ရမှာပါ ။ ဒီလိုဆဲသံတွေကတော့ စက်ဆုပ်ဖွယ်ရုတ်ရင့်  ကြမ်းတမ်းပြီး ရုဒ္ဓရသ ၊ ၀ိဘစ္ဆ ရသ နဲ့ ဘယာနကရသ တို့ ကိုခံစားရစေမှာပါ ….။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်တွေ့ လေးနောက်တစ်ခု ပြောချင်တာကတော့ ဆဲဆိုကြရာမှာ အဓိပ္ပါယ် မသိလည်း ဌန် ၊ ကရိုဏ်း ကျကျ ဆဲနိုင်ရင် နာစရာ ကောင်းလှပါတယ် …..။
တစ်ခါတုန်းက ကျနော်နဲ့ ယိုးဒယား တစ်ယောက်တို့ အကြီးအကျယ် စကားများကြပါတယ် ။ ယိုးဒယားကောင်က စပြီးဆဲတယ်ပေါ့ ဗျာ။ ဘယ်ရမလဲ ကျနော်လည်း အားကျမခံ ဗမာလိုပြန်ဆဲတာပေါ့  ။ ဒီကောင် ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ ဆဲ တာကို ကျနော်နားမလည်ပဲ နာ တတ်သလို ကျနော်ဗမာလိုဆဲတာကိုလည်း ဒီကောင်ကနာသဗျ ။ ကျနော်လည်း နောက်ထပ် “ကရင်” လိုပါ ဆဲပစ်လိုက်ပါသေးတယ် …။ ဒါလည်း ဒီကောင်နာတာပဲဗျ ….။
ပီပီ ပြင်ပြင် ဌန် ၊ ကရိုဏ်း ကျကျ ဆဲရင်ဖြင့်  ရသ မြောက်ပြီး ခံစားလို့ရပါတယ် …..။ (ခံစားမှု ဆိုးဆိုး ပေါ့ ဗျာ ) …. ဒါကြောင့် ဘေးကကြည့်နေသူ အဖို့မှာ အမ္ဘုတရသ ကိုခံစားပြီး အံသြရမယ်ထင်တယ်ဗျို့  ….။
နောက်ထပ် ၀ီရ ရသ မြောက်စေတဲ့ ဆဲ ခြင်းကိုတော့ ရုပ်ရှင်တွေမှာ တွေ့ ရမှာပါ….။ ကိုယ့် ဘက်က ဇတ်လိုက်က ရန်သူနဲ့ချရင်း ဆဲ တယ်ဆိုပါတော့ …… အင်းးးးးး အားတက်ပြီး ၀ီရ ရသလေးများ မြောက်သွားမလားလို့ ။
ဒီလိုလေ “ ခွေးမသား ဖက်ဆစ်တွေကို မျိုးဖြုတ် ပစ် ဟေ့  ….” ဒီလို ဆိုရင် ရုပ်ရှင်ကြည့် ရင်း စိတ်အားတက် ကြွလာမယ် ထင်ပါတယ် ………..။
အဲဒီမှာ ပြောစရာရှိတာက သန္တရသ နဲ့ ကရုဏာရသ ကိုခံစားရစေတဲ့ ဆဲဆို သမှုပြုတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးလည်း ပြောချင်သေးတယ်ဗျို့  …….။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် အနည်းငယ်လောက်က ကျနော့် ရဲ့  စပယ်ယာ တစ်ယောက်ဟာ သစ်လုံးကားမှောက်ပြီး သေကံမရောက် သက်မပျောက်ပဲ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ် ….။ အဲ ….အိမ်ကိုလည်း ပြန်ရောက်ရော သူ့ မိန်းမက ငိုကြီးချက်မနဲ့ ပြေးထွက်လာပြီး ယောက်ကျားလုပ်သူကို ဖက်ပြီး နမ်းတယ်လို့များ ထင်သလားဗျာ …..။ မဟုတ်ဘူးဗျို့  …. လုံးဝ တက်တက်စင်အောင်မှားပါတယ် ….။ ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ ……
ယောက်ကျားကို ဗိုက်ကြောဆွဲလိမ်ရင်း “ သေချင်းဆိုး ဟင် ….သေနိုင်ခဲကြီး …ဒီကားကို မလိုက်ပါနဲ့လို့ ပြောနေတာမရဘူး …. ငါလုပ်ကျွေးမှာပေါ့  ဟဲ့ …” လို့ အားရပါးရ ဆဲပြီးမှ ငိုတာဗျို့ …..။ သူုတို့  လင်မယား အလွမ်းသယ်ပုံက တစ်မျိုးပါ ….။ သူ့ စရိုက်သူ ပေါ့ လေ ….။ ဒီမြင်ကွင်းကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ရတဲ့ ကျနော့် မှာ ကရုဏာသက်ပြီး ခေါင်းတည်ိမ့်  ညိမ့်  နဲ့ စိတ်ချမ်းသာ ရတာပေါ့လေ …..။ ဒါတွေကတော့ ဖြစ်ရပ်လေးတွေကပံ့ ပိုးပြီး ဆဲဆိုခြင်း အဓိပ္ပါယ်ကို မှိန်သွားစေရင်း ရသလေးတွေ ခံစားရစေမယ် ထင်တယ် …။
ကိုယ်တွေ့ နောက်တစ်ခုကတော့ ………
တစ်ခါက နယ်မှာနေတဲ့ ဦးလေးဝမ်းကွဲ တစ်ယောက်က ရန်ကုန်ကို ရောက်လာပါတယ် ….။ ကျနော်လည်း သူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့ ဂျေဒိုးနတ် မုန့်ဆိုင်ကို ခေါ်သွားတာပေါ့ လေ ။ ဟိုရောက်တော့ မုန့် တွေက ပြတ်သလောက် ရှိနေပါပြီ ။ မုန့် လက်ကောက်လို အကွင်းလိုက် မုန့်  ရိုးရိုးနဲ့
အဲဒီ အကွင်းလိုက်ပေါ်မှာ ချောကလက်အုပ်ထားတဲ့  မုန့် ပဲရှိတော့တာမို့ နှစ်ခုလုံးချပေးလိုက်တာပေါ့  …။
ဦးလေးက မုန့် တစ်ခုကိုကောက်ကိုင်ပြီး ပြောလိုက်ပုံက “ ဟ… ငါ့ လခွီး အတော်ဘဲ ” တဲ့ ……။
ကျနော်လည်း အားရပါးရ ရီ(ရယ်) ပစ်လိုက်တာပဲဗျို့  ….။ မုန့် ကို ကိုင်ပြီး သေသေချာချာ ကို ဖင် လှည့်  ခေါင်းလှည့်  ကြည့် ပြီးမှာပြောတာဆိုတော့ …… စဉ်းစားကြည့် ပေတော့ ဗျာ ….။
သူ့  အဆဲလေးက အကျင့် ပါနေလို့ ဆဲရင်း စားချင်နေတုန်းမှာ ဂျေဒိုးနတ် မုန့် ကိုစားရလို့ အားရ၀မ်းသာ ပြောလိုက်တဲ့  “အာလုပ်” စကားလေးပါ ….။ ဟာသရသလေး ပဲဆိုပါတော့ ……………..။
ဒီတော့….. ဘာကြောင့်ဆဲဆဲ ဘယ်ဘာသာ မှာမှကောင်းတယ်လို့ ဆိုမယ်မထင်ပါဘူး ….။
လူမျိုးအသီးသီး ဘာသာစကားအသီးသီးမှာ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့တော့  ရှိနေဦးမှာပါ ….။ နောက်တစ်ခုက ခံစားချက်ကို ဖွင့် ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ လည်းဆဲတတ်ကြပါတယ် …။ ကျနော့် အနေနဲ့က ဆဲ ဆိုခြင်းအမှုကို ထောက်ခံခြင်း ၊ ကန့် ကွက်ခြင်း မပြုသလို နှစ်သက်ခြင်း ၊ မနှစ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားမှုလည်း မထားပါဘူး ။
အချို့ သော ဆဲဆို တိုင်းထွာခြင်းတွေဟာ ရသ တစ်ခုခုမြောက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်  ….. ရသတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အနုပညာလို့ ဆိုရရင် ……………………………………။
ဆဲဆို တိုင်းထွာခြင်းသည်လည်း အနုပညာမြောက်သတဲ့လား ကိုဆာမိရေ။
ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး ဆဲဆိုလိုသူများအတွက်တော့ ဒီလိုတွေးမိပါရဲ့
၂၀၁၃ တွင် ရွာသူရွာသားများ ဆဲဆိုနှစ် ဖြစ်ကြလေကုန်ရာ၏။
အစ်ကိုခ ရေ ….
စောစောစီးစီး အားပေးသွားတာကျေးဇူးပါဗျာ ။ သွားရင်းလာရင်း မတူတဲ့ဝန်းကျင်နဲ့
မတူတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဟိုတွေးီးတွေးနဲ့ ရေးမိသွားတာဗျို့  …
အမှန်တော့ ဆဲစေချင်လို့ မရည်ရွယ်ပါဘူးခင်ဗျ ….
ခွိ။ ကိုဆာမိ ပို့(စ) ကို မျှော်နေတာ ဘာတွေဘယ်လို ဆဲ မတုန်းလို့။ အရေးအသားကတော့ ဖတ်လို့ကောင်း။ ရီလည်း ရီရနဲ့။ ရွာထဲ ဆဲတာတွေများ ခေတ်စားဦးမလားပဲ။
အနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲတော့ ဆဲဆိုခြင်းသည် ရင်းနှီးခြင်း ချစ်ခင်ခြင်းလို့ ပြောရမည်ဖြစ်၏။
အမေအဖေ ဆဲတာတော့ ချစ်စနိုးပဲ ဖြစ်၏။
ကျုပ်က မဆဲပါဘူး ဗျာ … ဟဲ ဟဲ
ရွာထဲ ဆဲတာကတော့ ရိုးနေပါပြီ …။
ကိုကြီးပေါက်ပြောသလိုပဲ တစ်ချို့ က ရွဲ့ ပြီး ဆဲခံချင်လို့ရေးတယ်တောင်ရှိသေးဗျာ …
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားရှုထောင့် တစ်ခုက တွေးကြည့် တာပါ ။
မမွန်မွန်ရဲ့  စကားလုံးအတွက်ကတော့ ဖြစ်ရပ်လေးသိမှ ဖြစ်မှာမို့
ဦးဆာမိရေ..လုံမလည်း ဆဲတတ်တယ်.. “နင့်မေကြီးတော်” တဲ့..
ဟုတ်ပကိုဆာမိရေ.. ဆဲတာတောင် ချစ်စနိုးနဲ. ဆဲတာလဲရှိသကိုးဗျ..
တစ်ခါတလေ ကောင်မလေး တစ်ယောက် အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းလို. ရှေ.ကဖြတ်သွားရင် ကိုယ်နဲ.လဲ ရည်းစားမဟုတ် တပ်မက်မှုကလဲ ဖြစ် အားမလိုအားမရနဲ. မသာမလေး ချောတာကွာ ဆိုပြီး ဆဲမိတာလဲ ရှိသကိုးဗျ.. ဟိဟိဟိ..
ဘောလုံးပွဲလဲ ကြည့်အုံး အရင်တုံးက မန်ယူက နစ္စတယ်လ်တွိုင်းကို အရမ်းအပြေးမြန်တော့ ဟာကွာ ငါ့ကောင် ကောင်းတာကွာ မြင်းနဲ့စပ်ကျသလား တောင်ထင်ရတယ်.. ငါ့xxxx… ဆိုပြီး ဆဲမိတာလဲ ရှိသကိုးဗျ…
အော် ဆဲဆိုခြင်း အနူပညာ ပေါ့နော်…… ကြိုက်သဗျာ..
ဦးဦးဆာမိပြန်လာပြီလား မုန့်တွေမှာလိုက်တာနော် ပါခဲ့လား ဦးလေးဆာမိက ရွာထဲကို ဆဲပြီးမှဝင်လာတယ်တော့ :harr:
@ကိုရွှေတိုက် ရေ ….
ယောက်ကျားအများစုဖွဲ့ နေတဲ့နေရာမှာ ရှောင်မရဘူးဗျို့  …
ကျုပ်လည်း ယောက်ကျားတွေချည်းသာ ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတုန်းက (ထောင်မဟုတ်ပါ)
ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ ပေါ့  ။ မိုးလင်းတာနဲ့ ဆဲသံ စ ကြားနေရတာလေ ။
ဒီတော့ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ခံစားမှုပြောင်းကြည့်  တဲ့သဘောပါ …
ဘောပွဲတွေမှာတော့ လူအများနဲ့ ကြည့် ရင် သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ ….ဟဲ ဟဲ
မှာလိုက်တာလည်းသိပါရဲ့  …
သတိလည်းရပါရဲ့  …
သွားရတဲ့နေရာက မြို့ မဟုတ်တော့ …
ဂျလေဘီ ရောင်းမကောင်းရင် မဆဲဘူးဗျ …
ကျုပ်က အကုန်လုံး စားပစ်လိုက်တာပဲ …..
ဦးဆာမိ.. ဂျလေဘီ မရောင်းရလို့ စိတ်တိုရင် ဘိုဆဲရဲဟင်???
ဒါက ဒီလိုရှိတယ်ဗျ။ ကြုံတုန်း ဝင်ပွားလိုက်အုံးမယ်။ ကိုဆာမိ ပြောသလို တချို့က အကျင့်ပါနေလို့ ဆဲတာလည်း ရှိတယ်။ ကြွားတာကို အကျင့်ပါနေလို့ ကြွားနေရတာလည်း ရှိတယ်။ မကောင်းတဲ့အကျင့် အကြာကြီး စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ခဲ့တော့ ဖျောက်ဖို့ခက်သားလားဗျာ။ ကျနော်တို့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာအရ မကောင်းတဲ့အကျင့်ကို ဝါဿနာနဲ့တကွပယ်နိုင်တာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ပဲ ရှိတယ်။ ရဟန္တာမထေရ်ကြီး တွေတောင် ကိလေသာတွေ မရှိတော့ပေမယ့် သူများကို မထိခိုက်နိုင်တဲ့ အသေးအဖွဲ အကျင့်လေးတွေ ကျန်နေတတ်သေးတာကိုး။
မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်တုန်းကလည်း ပိလိန္တဝစ္ဆဆိုတဲ့ မထေရ်ကြီးတပါးဟာ ရဟန္တာကြီးပဲတဲ့။ တန်ခိုးလည်း အရမ်းကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုနပြောသလို ဆဲတာ ဆိုပါတော့ဗျာ။ တကယ်က ဆဲတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မထေရ်မြတ်ဟာ ရှေးဘဝတွေတုန်းက ဘဝပေါင်းများစွာ အထက်တန်းကျတဲ့ ပုဏ္ဏားမျိုးမှာ ဖြစ်လာခဲ့သတဲ့။ ဒီတော့ သူများတွေကို သူ့လောက် မမြတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အနေနဲ့ “သူယုတ်” “သူယုတ်” ဆိုတဲ့ အနေနဲ့ နှိမ့်ချဆဲရေးခဲ့ဖူးသတဲ့။ ရှေးဘဝတွေနဲ့ ရဟန္တာမဖြစ်ခင်က ဆိုပါတော့။ ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီလို နှိမ့်ချချင်တဲ့ စေတနာ မရှိတော့ပေမဲ့ တခါတရံ ပါးစပ်က ယောင်ပြီး ထွက်တတ်သတဲ့။ အဲဒါကြောင့် လူတွေနဲ့ နီးတဲ့နေရာမှာ မနေပဲ တောကျောင်းကလေးတခုမှာ သွားသီတင်းသုံးရှာတယ်။
အဲဒါ တနေ့တော့ ဆွမ်းခံကြွလာတုန်း ပိတ်ချင်းသီး ကုန်သည်တယောက်က သူရောင်းဖို့ ပိတ်ချင်းသီးတွေကို လှည့်နဲ့ အပြည့်တိုက်လာတုန်း မထေရ်က ယောင်ပြီး ဟဲ သူယုတ် လှည်းပေါ်က ဘာတွေတုန်းလို့ မေးလိုက်မိသတဲ့။ အဲဒါ ဒကာက စိတ်ဆိုးပြီး ကြွက်ချေးတွေဘုရား ကြွက်ချေးတွေလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ လှည်းပေါ်ကကုန်တွေ အားလုံး ကြွက်ချေးတွေ ဖြစ်ကုန်ရောတဲ့။ နောက်တော့မှ သူ့ကို လူတွေက ဝိုင်းပြောတာနဲ့ လာတောင်းပန်ပြီး လှည်းပေါ်ကဟာတွေက ပိတ်ချင်းသီးတွေပါ ဘုရားလို့ လျှောက်လိုက်မှ အကုန်နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့။
ကဲ ဒီတော့ ဆဲတဲ့ ဝါဿနာလေးတွေ မစွဲမြဲသွားခင် အကျင့်ဆိုတာ လူက လုပ်တာမို့ ကြိုးစားပြီး ပြင်ကြည့်ကြရအောင်။ မလွယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး ကိုဆာမိရေ။
@ကိုစံလှကြီး ခင်ဗျာ …
အစ်ကိုရှင်းပြတာ တကယ်ဗဟုသုတရပါတယ် ဗျာ …
ဘယ်လိုဆဲဆဲ မကောင်းတာသိပေမဲ့ တစ်ချို့  နေရာတွေမှာ ၊ တစ်ချို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ
ရှောင်မရပါဘူး ….. ၀ါသနာအစွဲလေးတွေပေါ့ နော ….
ကျနော်လည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့်  အလုပ်သဘောအရ အပြင်မှာ သတိထားပါလျှက်
ဆဲမိပေမဲ့ …. ရွာထဲမှာတော့ မဆဲ ဖူးပါဘူး ….
အားပေးတာ ကျေးဇူးနော …..
အစ်ကိုပြောသလိုပဲ ဘာသာစကားတွေသင်ရင် မကောင်းတာအ၇င်တတ်သဗျ
ကျနော်လည်း ကရင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့  နေတုန်းက ကောင်းတာတွေ မတတ်ပဲ
အဆဲ ကိုသာ တတ်လိုက်တာဗျို့  …. အဲ ….
ရိုး ရာတာလဘော ဟင်းချက်နည်းလေးတော့ မှတ်မိနေသေးတယ်
တစ်နေ့ ကျရင် တော့ ရေးဦးမယ် ။ ကိုထူးဆန်းကိုလည်း အကြွေးဆပ်ရင်းပေါ့  …
ဘယ်ကမှန်း ဘယ်သူမှန်း မသိကြဘဲ မမြင်ကွယ်ရာဆိုပြီး ဆဲကြပြောကြငြင်းကြတာကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတခုထဲမဟုတ်တာအမှန် ဆိုတော့ကာ အပြင်မှာသာတွေ့ကြည့် မတွေးရဲစရာဘဲ အလယ်အလတ်လမ်းဘဲ လျောတ်စေချင်တယ်
တခုတော့ဝန်ခံပါရစေ ဘာသာစကား အသစ်တခုကိုလေ့လာတိုင်း ဆဲတာကစသင်ရပါတယ် စတတ်ပါတယ်
စိတ်ထင်သလို ပြောကြငြင်းကြလို့ကိုယ့်ကွန်မင့်တောင် ကိုယ်မပြင်နိုင်တော့ဘူး ငါးခုံးမတကောင်ကြောင့်
တလှေလုံး မပုတ်ပါစေနဲ့ဗျိုး
(—————) ကိုဆာမိကြီးရေ ၀င်ဆဲသွားပါကြောင်း အဲမှားလို့
နုတ်ဆက်တာ တွေ့ တယ်ကွာ
ကျုပ်ပြန်ရောက် ….မောင်ရင်အထွက် …
တစ်နေ့ ပြန်ဆုံဦးမှာပါ ….
@ကိုရင် ဖောဂိုင်း ရေ ….
ရွာထဲမှာ ဖွင့် စရာမလိုဘူးဗျို့  … မိချောင်းမင်း ရေခင်းပြသလို ဖြစ်လို့ ကျုပ်ပြေးနေရပါဦးမယ်
အနုပညာမြောက်အောင်ဆဲနည်းသင်တန်း ရွာထဲမှာဖွင့်လိုက်ပါလား ကိုဆာမိရေ…….
အန်ကယ်ဆာရေ သများတို့တော့ သယ်ရင်းချင်းချင်း
သောက်ရမ်း ရင်းနှီးလာရင် သောက် တလုံးတွင်တွင်သုံးပီး ဆဲကြတော့တာဘဲ။
ဒေါသထွက်လဲ ဆဲ၊ ချစ်လဲ ဆဲ နဲ့အကျင့်ကြီးကိုပါလို့။
နယ်မှာဆိုပိုဆိုးသေး။ အိမ်ကညီအကိုမောင်နှမအရင်းတွေရော ၀မ်းကွဲတွေရော
စုမိရင် ဟက်ကောင်မ ညဉ်းတော့လား ငါတော့လား နဲ့အားပါးတရပြောကြတာ ခိခိ။
လုပ်ငန်းခွင် မှာတော့ ဘာဘဲပြောပြော အိန်ဒရေရသယောင် ယဉ်ကျးသယောင်
နေရတာပေါ့လေ။ အပေါ်ယံ ယဉ်ကျေးပြပြီး အတွင်းထဲမှာ ကျိတ်ပြိုင် ကျိတ်ပုပ်နေကျတဲ့
လူတွေကို တွေ့ရဖန်များလာတော့ ကိုယ်လဲ ယဉ်ကျေးချင်ယောင်ဆောင်တတ်နေဘာဘီ ဟိ။
မယုံရင် လုံးဝမရင်းနှီးသေးခင်မှာ ဒေါ်ရွှေအိနဲ့ စကားပြောကြည့်၊ မဆဲတတ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြမယ်။ :harr:
တစ်ခါတစ်လေ ကျုပ်လည်း ယဉ်ကျေးချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ လောကကို သရော်ချင်ပါတယ်
တစ်ချို့ လူတွေကလည်း ပွင့် လင်းတာနဲ့  ယဉ်ကျေးတာကို ရောထွေးချင်ကြတယ်လေ
ဟန်ဆောင်တာတွေကို စိတ်ကုန်လို့ အလုပ်တောင် လုပ်မစားချင်အောင်ပါပဲ
ခက်တာက ….လူ့ သဘောကို က ……
အစ်ကိုပြောတာကို လက်ခံပါ့ ဗျာ ….။
ကျနော်လည်း ဆဲသံတွေ ကြားထဲေ၇ာက်နေတုန်းကအာရုံပြောင်းခံစားကြည့် တာပေါ့ နော်
အခြေအနေ ၊ ဟန်ပန်အမူအရာတွေက အဓိပ္ပါယ်ကို အလေးအနက်ပြုတာပေါ့ နော
ရွာသားထဲမှာ အစ်ကိုပြောသလို ရေးဖူးသူကတော့ တစ်ယောက်မကဘူးထင်တယ် ….
ကျနော်တောင်မှ လွတ်ပါ့ မလားမသိ ….ဟဲ ဟဲ
အခန့် မသင့် ရင် ကျန်ာလည်း အဆဲ ခံထိမှာ …..
ကျနော်အမြင်က ဆဲတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက သတ်မှတ်ချက်လို့ဘဲမြင်မိပါတယ်။
ကောင်းသောလား ဆုိးသောလား ခွဲခြားနိုင်တာက ထွက်လာတဲ့လေသံကိုဘဲမူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းချင်း စကားပြောရင်း ဆဲကြဆိုကြတာကတော့ ဆဲပြီးရင်လေးထဲပျောက်သွားတော့
စာထက်အက္ခရာတင်ရင်တော့ အမြဲတင်ကျန်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုလေသံနဲ့ဆဲဆဲ
ဒါပေမယ့် ရွာသားထဲမှာ အဆဲခံချင်လို့ ရေးတာဆိုပြီး ရေးခဲ့ဘူးသူရှိတယ်နော်။
ကျွန်မကတော့ဒီလိုထင်တယ် ယောက်ျားလေးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေ နားခံစားချက်ပဲမတူလို့လားမသိဘူး။
ပစ္စည်းတွေထည့်ခိုင်းနှိုင်းတာတို့ဘာတို့ဆို ပြောတဲ့လူအစား မျက်နှာတွေအန်းလာတယ်။
ဓာတုကလျာရေ့  ….
မိန်ကလေး အများစုက ဒီလိုပါပဲ …
အိမ်က ဇနီးဆိုရင် အဲသလို ဆဲ တာမကြိုက်လို့ သူနဲ့ရပြီးကတဲက အကျင့် လေးတွေ မှိန်သွားတာလေ
သူတို့ နန်းတော်ရာသူတို့ က အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့် ဆိုခံစားပစ်တယ်ထင်တယ် …
ဒါကြောင့်  ဒီအသံကြားရင် အလာဂျီ ဖြစ်ချင်တာပေါ့  … :harr:
@ဗျို့  ကိုရွာစား မင်းနန်
ရှင်မွေ့ လွန်း ကိုချော့ လိုက်ပေါ့ ဗျာ …
ဘယ့် နယ် အနုပညာမြောက် ဆဲရမှာတုန်း …
ကျုပ်မြှောက်ပေးလို့ ဖြစ်နေပါဦးမယ် ….
ခုတလော အိမ်ကဟာကြီးနဲ့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး
ပြောရဆိုရတာများလာတော့ အဆဲလေးတွေ ပါနေကာမှ
..ဟူး တွေးရတာ ရှုပ်ပါတယ်
ဖေ့စ်ဘုတ်က အနုပညာမြောက်သူလေးတွေ သွား ဂလုတာပဲကောင်းတယ်..
တော်ကြာ ကျုပ်နဲ့ သောက်စကားများနေရအုံးမယ်…
(ဝင်နောက်သွားပါတယ်.. :harr: )
ကရင်ဆာ က ကျုပ်ကိုဆဲရင်တော့ ဘော်ဘော်ချင်း ပေါ့
တစ်စိမ်းတစ်ယောက်က လာဆဲရင်တော့ လက်သီးပေါ့
ကိုရင့် ကိုတော့ ဆဲ မလားဗျာ ….
ကျုပ်ကို တွဲခေါ်ခဲ့တဲ့  သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပဲ ..
အဲဒီ အမှတ်တရလေးတွေလည်း ပြန်ပြောချင်သေးဗျာ …..
အစ်ကိုကြီးပီသတဲ့ မောင်ရင့် ကို လည်း လေးစားပါ့ ဗျာ ……
ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်သရွေ့ တော့ သတိထားသင့် တာပါပဲ
ယဉ်ကျေးချင်ယောင်ဆောင်ရတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေမှာ အယောင်ဆောင်ရဦးမယ်လေ ….
ကျုပ် ဆဲတိုင်းသာ …
ခညားကို သတိရရမယ်ဆိုရင် ….
တစ်နေ့ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်များ ရှိမတုံး မသိဘူးရယ် ..
ကျုပ်ဘဂျီးကတော့ “ငြင်းခုန်ခြင်း အနုပညာ” … ဒဲ့ …။
အခု ဥဆာမိ က “ဆဲဆိုခြင်း အနုပညာ” …. ဒဲ့ …။
နောက်ခါ သူညားဒွေဂို ဆဲရင် ဆင်ခြေပေးလို့ ရတွားပီ .. ဟီဟိ …
ကျုပ်လည်း ကျုပ် ညီတွေကို ဆဲတတ်တယ်ဗျ ….။
ချစ်လို့ ဆဲတာပေါ့ဗျာ …။
ဒီကောင်တွေနဲ့ စကားပြောရင် အဆဲလေးနဲ့ စတတ်တယ် …။
ဘိုဘဲ ပြောပြောပေါ့ ဥဆာမိရေ …
ဆဲရေးတိုင်းထွာ ဖရုသဝါစာ ပေါ့ဗျာ ….။
သို့ပေသိ … မုသာဝါဒ လောက်တော့ မဆိုးရွားလောက်ပါဘူး …
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ …. ဘုရားက ဟောခဲ့တယ်လေ ….
“မုသားစကားဆိုရင် ရီရွှင်ဖွယ် အဖြစ်တောင် မပြောနဲ့” …. တဲ့ ….။
နို့ ကျုပ်ကတော့ ပြောတတ်တယ်နော် … ပုထုဇဉ်မို့ …..
နှစ်သစ်မတိုင်ခင် အသံပေးပြန်ရောက်လာလို့ ဝမ်းမြောက်လှပါတယ်။
ဘယ်လိုပြောပြော စေတနာ ပေါ်မူတည်ပြီး ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။
ဆဲပြောလဲ ပန်းနဲ့ပေါက်သလို ဆိုတာတွေ အများကြီးပါ။
နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းပါစေရှင်။ :hee:
ကွန်မိတိုင်း ရွာပြင်က ပတ်ကြည့် ပါတယ် ….
တစ်ချို့ ပို့ စ်တွေကို မန့် ချင် လိုက်တာ …. ခက်တာက ၀င်လို့ရအောင် မကောင်းပြန်ဘူး
တောကို ရောက်သွားတာလေ ….။
ရွာသူားတစ်ချို့ နဲ့လည်းး အဆက်အသွယ် မပြတ်ပါဘူး ….
နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်စေကြောင်း ဆုတောင်းပါတယ်နော ….
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ …အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ …. ဟိုတွေးဒီတွေး ဟိုရေး ဒီရေးပါ ..။
အနုပညာ ရသ တွေနဲ့ ….
ဟုတ်လို့ ပါလား ..။
ဆက်ဆက် ရေ ….
မောင်ရင့် ကိုသတိယလို့ ….
သွားတဲ့နေရာမှာ ဆဲဆိုသံတွေချည်း ကြားနေရလို့ အာရုံပြောင်းကြည့် တာ
ဆဲဆိုခြင်းအနုပညာဆိုရင်တော့ ဒို့ဘကြီးပုကို ခရက်ဒစ်ပေးရမယ်။
သူ့လောက် အနုပညာမြောက်အောင် ဆဲတတ်တဲ့သူ ဒီရွာထဲမှာ မရှိသေးဘူးထင်တယ်။ :harr:
အတော်များများ မိန်းကလေးများမကြိုက်လောက်ပါ ဘူး …
စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ဖတ်သွားရတာကိုအားနာရင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ….။
ဆဲတယ်ဆိုတာကို မကောင်းဘူးလို့ပဲ စိတ်ထဲမှာ စွဲမှတ်ထားတာ။ ကိုဆာမိပြောသလိုဆိုတော့လည်း သူ့နေရာနဲ့သူတော့ ရှိတာပေါ့နော်။ ဆဲသံကြားရင် စိတ်ညစ်တတ်တာကိုတော့ မပြင်နိုင်သေးပါ။ ဒါပေမယ့် အနုပညာမြောက်အောင် ဆဲကြရင်တော့ နည်းနည်းခံသာလေမလားဘဲ…..
ရေးခဲ့ဖူးတာလေး.. အောက်ဆုံးမှာ..ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်…။” အောက်တန်းစား ဋီကာ” တဲ့..
“ ဆဲဆိုခြင်း အနုပညာ” နဲ့….ဆက်လိုက်လို့ရတာပဲ..
အမှန်တော့.. “ဆဲဆိုခြင်း ၀ိပညာ”လို့တောင်သုံးချင်မိတယ်.
ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့် ပြီး ဘယ် တက္ကသိုလ်မှာသင်တာလဲဆိုရင်တော့
သဂျီးပဲ ရှင်းပြပေတော့  နော ….
ဂျလေဘီ အိမ်ပြန်ခဲ့ ပြီပေါ့ 
တေးသီကာ လွမ်းမိပါရဲ့ 
လဒ ( ဠင်းတ) လောက်တော့ငှက်တိုင်းလှတယ်လို့ 
ဆိုတော့ ကာ ………..
လင်းဒ လို့ ပြောတာဟာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဆဲတာမမည်ပါဘူး
ဦးဆာမိရေ..ကျမကတော့စိတ်တိုရင်…ကိုယ့်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူဆို..”လင်းတ” လို့အမြဲဆဲလေ့ရှိတာ..အဲဒါဆဲတာလားတော့မသိဘူး..ကျမကတော့ကိုယ့်ဖာသာဆဲတာလို့ယူဆထားတာ.. အခုတလော လင်းတ နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်တွေထွက်လာလို့.. ဘယ်လိုပြောင်းဆဲရကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတာ.. :harr:
အခုမှ အသေအချာ မန့်မယ်
ဆဲတယ် ဆိုတာက ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုလဲ ပြသရာရောက်သဗျ
ဦးမာဃတော့ လဒ ဆိုတဲ့ စကားကို သုံးတတ်တယ်
ငတုံး လို့ ခေါ်တာကလဲ ဆဲတာပါပဲ တဲ့
ဦးမာဃ မှတ်ဉာဏ်က အဲဒီတစ်လုံးပဲ မှတ်မိတယ်
ကျန်တာတော့ ပြန်ရှာသာ ကြည့်လိုက်တော့ :kwi;
မှတ်ဥာဏ် အတော်နည်းတာ ကလား … ငွင်းး ငွင်းး
ကျုပ် မှတ်မိသေးတာ ချိဒယ် …
ဥမာဃ လို့ ခေါ်တာလဲ ဆဲတာပဲ .. ဒဲ့ …
ပိုသေးလား .. မှတ်ထား …
ခိုင်းနှိုင်းတာမို့သိပ်မဆိုးလှပါဘူး
နတ်တွေ သဂျား တွေ ဆဲနည်းလေးတော့ သိချင်သား …….
အန်စာတုံး ဆဲနေပါတယ်ဗျို့  …..
ဥစာမိ မေးလို့ ပြန်ဖြေမယ်
နတ်တွေ သဂျားတွေက ဆဲဘူးဗျ
သူတို့မှာ ဆဲရလောက်တဲ့ အကြောင်းအချက် မရှိဘူး
လောဘ၊ဒေါသ၊ မောဟ၊ စတာတွေအပြင် အခြားအခြားသော အကြောင်းတွေကြောင့်ဆဲတာ
ဗြဟ္မာ့ပြည်ကနေ အော့်ကြောလန်လို့ အဝီစိကို ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးထားတာပဲဗျာ
မောင်ကျောက် နဲ့ အပေါင်းအဖော်များကတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အဆဲလေးမပါရင် အစာမကျေသလိုဘဲ….
ကျနော်လည်း ခရီးထွက်ရင်း ဟိုတွေးဒီတွေး ရေးမိရေးရာပေါ့ ဗျာ
မြှောက်ပေးတဲ့ သူနဲ့ ဖြစမြောက်ရေးကူညီပေးသူနဲ့ ဆိုတော့ 
ကြုံ နေကြအကြောင်းလေးတွေ ရေးမိတာပါ ။
ဘော်ဒါတွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ဦးကျောက်ပြောသလိုပဲ ဗျို့ 
ရွာထဲမှာ အနုပညာ​တွေ အရမ်း​မြောက်​​နေတယ်​ထင်​လို့
ဟုတ်ပါ့ ဥဆာရာ …
သဂျီး က အစ
အချုပ်တန်းကိုင်ပီး ဆဲနေတော့တာပဲ ..
ဒီပို့စ်နဲ့တော့ ကွက်စ် မှ ကွက်စ်တိ ပဲ ဗျို့ …….
ကျုပ်တောင် ဆဲချင်တာ အာယား .. အဲ .. လက်ယား လာဘီ .. ခွိခွိ
ဆောရိုးဆဲနည်း7နည်း..
ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းဆဲတာ …တွေးတွေးပြီး သိမ်ငယ်နေပစေ…အာဟိ ….
ပဲမြစ် ကျန်သေးတယ် ဦးဆောရ
သယ်​ရင်းတစ်​​ယောက်​ဆဲတာ အမှတ်​တရပဲ… ဘာတဲ့.. တာမ တဲ့.. ဖက်​လုံးမ တဲ့.. ဟိဟိ..
စကားအတင်းစပ်​.. ၂၀၁၃ ထဲမှာ နင့်​​မေကြီး​တော်​ ထက်​ ပိုဆဲတတ်​ခဲ့ပါ​ကြောင်း..
ညီမတစ်ဝမ်းကွဲလေးကျတော့ ငယ်ငယ်က ABCမ၊ ABCမ နဲ့ဆဲလေ့ရှိတယ်
“နင့်မေကလွား” နဲ့ “နင့်မေဘိုးအေ” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဆိုရင်ကော ကိုရင်ဆာမိ……ကရုဏာ ရသ မြောက်ပါတယ်နော်